Barasaabka Turkana oo sheegay in la buunbuuniyay baahida ismaamulkaasi ka jirta – Breaking News,Business, Kenya, Somalia, Politics, Lifestyle, Sports
Barasaabka dowlad deegaanka Turkana Josphat Nanok ayaa sheegay in baraha bulshada la soo geliyay sawiro qaarkood aynan ka turjumayn xaaladda dhabta ah ee ka jirto deegaanadaasi.
Waxaa uu hoosta ka xariiqay in qaar ka mid ah sawirada la faafiyay ay yihiin kuwo la xariira dhacdooyin hore iyo kuwa ka dhacay dalal kale.
Arrimahan ayuu ku sheegay inay hoos u dhac ku keeni karaan dadaalada dowladda dhexe iyo hay’adaha gargaarka ay wax uga qabanayaan xaaladaha adag ee la soo darsay shacabka ku nool ugu yaraan 12 ismaamul oo ay Turkana ka mid tahay.
Dowladda dhexe ayaa 1.7 bilyan oo shilin u qoodeysay inay kula tacaasho saameynta abaaraha iyo roob yarida ay ku yeesheen ismaamulada kala ah Isiolo, Garissa, Wajeer, Kilifi, Baringo, Marsabit, Tana River, Samburu, Mandera, Kitui iyo Makueni.
Barasaabka ismaamulka galbeedka Pokot Prof. John Lonyangapuo ayaa dhankiisa sheegay inay jiraan siyaasiyiin faafiyay waxyaabo been abuur ah oo ku aaddan gaajada ka jirto qaar ka mid ah deegaanada dalka si ay u dhaawacaan sumcadda iyo waxqabadka mas’uuliyiinta xilalka haya
← Aqalka sare ee dalka oo u yeeray barasaabka Mombasa
Kheyre: Ma jiro Askari aan mishaar la siin →